Medical Writings ဆေးပညာစာများ: We need you to save life အသက်ကယ်ဘို့ သင့်ကိုအလိုရှိသည်
We need you to save life အသက်ကယ်ဘို့ သင့်ကိုအလိုရှိသည်
"A bottle of blood saved my life. Was it yours? သွေးတပုလင်းက ကျမအသက်ကို ကယ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ သင်ပါလား"
Kyaw Zwar Shein မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော်က သွေးအသင်းက volunteer တစ်ဦးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် "လူ့ငယ့်သွေး" သွေးလှူအသင်းပါဆရာ။ ဆရာ့ရဲ့ သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တွေကို share ချင်လို့ ခွင့်တောင်းတာပါ။ ခွင့်ပြုပေးပါ။ Mobile နဲ့ သုံးတာများတော့ credit ပေးတဲ့နေရာမှာ share တဲ့နေရာမှာ နည်းနည်း အခက်မခဲရှိလို့ ကြိုတင် တောင်းပန်ပါရစေ။
1. Anemia (အနီးမီးယား) သွေးအားနည်းရောဂါ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/02/hb-gdl-celiac-disease-crohns-syndrome.html
2. Blood donation rules သွေးလှူခြင်းဥပဒေသများ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/02/blood-donation-rules.html
3. Blood Donation မြတ်သော နီသော သွေး http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/blood-donation.html
4. Blood Grouping (A, B, AB, O) အေ၊ ဘီ၊ အေဘီ၊ အို သွေးအုပ်စု ဇယား http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/b-ab-o.html
5. Medical check-up before marriage အိမ်ထောင်မပြုခင် ဆေးစစ်ချင် http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/05/medical-check-up-before-marriage.html
6. Rh blood group system (အာရ်အိတ်ခ်ျ) သွေးအုပ်စုခွဲနည်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/05/rh-blood-group-system.html
7. သွေးအုပ်စုပဟေဠိ အဖြေညှိခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/02/blog-post.html
Posted by Dr. Tint Swe at 12:02 AM